Ikhishi Lompompi Nentwasahlobo Yokudonsela phansi Isifutho
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela phansi Izicucu / WOWOW Ikhishi ompompi Commercial Sprayer
I-nickel ecijekile idiliza isikebhe ekhishini, Insimbi engagcwele, uqweqwe nobufakazi bokuqhuma, ikhwalithi ethembekile eyanele
Ikhishi isikulufu sokuphephela ekhishini lidonsa phansi i-sprayer 2312000
Imifino yasekhishini yokufafaza yokudonsa yasentwasahlobo ekuqaleni yenzelwe ukusetshenziswa kwezimboni ezindaweni zokudlela kuphela. Njengoba ungabona, ukusebenza nokuqina ezindaweni zokudlela kudinga kakhulu futhi yonke imishini yasekhishini enjengefrimu yokufafaza ekhishini yokufafaza kufanele isebenze kakhulu. Abasebenzi basebenzisa la makhompiyutha ekhishini lezimboni ngokushesha nangaphandle kobuchopho. Ukuphazamiseka okungaba khona kwenhlekelele yokuphephula ekhishini yokufafaza kungahle kube yinhlekelele. Ngenxa yalokho, izimbotshana zasekhishini yezimboni zenziwe ngokuhambisana namazinga embonini aphakeme kakhulu, nezinto zokwakha ezihlala isikhathi eside. Ku-WOWOW sivame ukusebenzisa amabanga embonini engenhla, futhi futhi sesigxile kakhulu ekuqineni nakulo faucet yasekhishini yezimboni elimangalisayo lisusa phansi isifutho.
Abantu abaningi bafake lesi siphethu ekhishini ekhishini banciphisa i-sprayer emakhaya abo. Ngokubukeka kwekhishi lakho, ukubukeka kwezimboni kungasebenzela ikhishi lakho kahle. Okungenani uyazi ukuthi ukuqina kwale faucet yasekhishini yezimboni kuyinto ephezulu, ukusebenza kungaphezulu kakhulu futhi ukwakheka kwayo kunika ukuxhumana okuluhlaza okwenziwe yizimboni ekhishini lakho. Njengoba iziphephe ekhishini zivame ukuba yizindawo ezigxile ekhishini, ngalesi sikejana esisekhishini esithandekayo esihlanza isifutho sokophuka nakanjani uzothola ukunakwa ekhishini lakho. Ngenxa yomklamo wayo omude, omncane, futhi omncane, leli faucet yasekhishini lilungele ngokuphelele ukwakheka kwekhishi kwanamuhla. Ngakho-ke, le isikejana sekhephu elisentwasahlobo lidonsa i-sprayer ngokuqinisekile izothuthukisa kakhulu noma imuphi umklamo wanamuhla wasekhishini.
Ifektri yasentwasahlobo idonsa isikulufu sokishini se-sprayer
Ikhishi yindawo lapho upheka khona endlini yakho. Kwabaningi ingxenye yokupheka akuyona inselelo, kepha ingxenye yokuhlanza iyona. Njengoba usupheke futhi udlile, ukuhlanza ikhishi ngokuvamile akuwona umsebenzi wokubonga kakhulu. Noma ngabe usanda kuhlanza ikhishi ngaphambi kosuku olufanayo, ngemuva kokudla konke kuzodingeka uqale uphindaphinde. Bekungeke yini kube kuhle ukuthi ube nokuzijabulisa okuningi ngokuhlanza njengokupheka? Yebo, ngeke sikwazi ukukuqinisekisa ukuthi ukuhlanza kuzoba ngumsebenzi othokozisa kakhulu, kodwa okungenani singakwenza kube okuthokozisayo ngesikhiphi sepheki lasekhishini lethu. Ngaphezu kwakho konke, singenza kube lula ukuhlanza ngefenisha ekhishini lethu lezimboni.
Isikhiphi sentwasahlobo ekhishini leWOWOW simdonsa phansi isifutho esinezakhi ezisebenzayo. Inhloko yesifutho esinomfutho ophakeme isusa kalula konke ukungcola kusuka emabhodweni nakumapani. Ngaphandle kwalokho, lesi isikebhe ekhishini yezimboni sinikeza izinhlobo ezimbili zemifudlana. Isifutho sokudonsa phansi sikunikeza isifutho sokucindezela esikhulu, futhi isikebhe esikhulu ekhishini se-arc ephezulu sinomfudlana ojwayelekile. Nge-hose yayo etholakalayo futhi eguquguqukayo kanye nekhanda lesifutho sokudonsa phansi, i-hose inganwetshwa ukuze ikhulise ukufinyelela kwakho kakhulu. Futhi ingalo ka-magnetic docking ibamba ikhanda le-spray ngokuqinile, ukuze lingazungezi nxazonke.
Isikebhe sokuphekwa ekhishini sidonsa phansi isifutho sokusetshenziswa kwezimboni
Ngaphandle kokusebenza kwayo, leli faucet yasekhishini entwasahlobo yokudonsa isifutho phansi lenzelwa ukuqina okuphezulu. Okokuqala, zonke izinto zokwakha azikwazi ukuhola futhi zingahambisani nokugqwala. Ngaphandle kwalokho, i-valve yokulawula izinga lokushisa kwamanzi yenziwa ngensimbi enkulu. Uzwa umehluko ngokushesha lapho usisingatha. Futhi isibambo sokufafaza senziwe ukusetshenziselwa ukuthengisa. Umehluko uyahlaba umxhwele uma uwuqhathanisa nefosili lasekhishini elijwayelekile. Njengoba izimbotshana zasekhishini yezimboni zingadingi imisebenzi eyenzelwe ukusebenzela 'ukufihla' le misebenzi, kulesi sikejana sekhephu elisentabeni sidonsa isifutho sokuphatha sikhona. Ngakho-ke akukho sisekelo esangifanele senziwe ekusetshenzisweni nasekuqineni kwalesi sibambo sethiphu ekhishini.
Isikebhe esishiywe ekhishini se-nickel entwasahlobo sidonsa phansi isifutho
Ngaphandle kokuqina nokusebenza, isitayela naso sibaluleke kakhulu uma ukhetha isikebhe sokukhishini sezimboni. Ufuna ukwakheka okuluhlaza, kanti nokho isikebhe ekhishini kufanele sibe nesitayela ngasikhathi sinye. Le faucet yasekhishini yezimboni yokudonsa isifutho phansi ikunikeza inhlanganisela ekhangayo ehehayo yokuhlanganiswa okungavuthiwe kwezimboni nenhle, eyingqayizivele. Kuvunguza okukhulu kunikela ngephethenisi lakho lasekhishini ngokubukeka okuhle kwezimboni, kepha uma ubheka imininingwane ngaleli faucet yasekhishini, uzophawula umklamo ocwengekile wesisekelo sefenisha ekhishini. Le nhlanganisela yenza lesi sitayela sehluke futhi sihluke. Elula, nenhle futhi lihlaba umxhwele ngasikhathi sinye.
Ukuhlanganiswa kwe-nickel okuhlanganisiwe kwesitofu sekhishi entwasahlobo kudonsa isifutho phansi kunikeza lokho kuqeda okuhle okudingwa ikhishi lakho. Lokhu kuqeda kunikeza ukubukeka okuhle kunoma iyiphi ikhishi, kungakhathalekile ukuthi uluhlobo luni lwephethenisi lasekhishini olikhethile. Futhi ngaphandle kwalokho uzozuza kunenzuzo ebonakalayo yokuthi ngeke ubone noma yimiphi imicu emincane engcolile kule faucet yasekhishini. Kulula kakhulu ukuyihlanza ukuze ihlale isesimweni esisha ngaso sonke isikhathi.
Ukufaka isikebhe sokuphekwa ekhishini ukudonsa phansi isifutho
Isikebhe sekhebula lasekhishini le-WOWOW sidonsa phansi i-sprayer kulula kakhulu ukuyifaka. Musa ukubeka ithrekhi engalungile ngenxa yobukhulu obuhlaba umxhwele bale faucet ekhishini yezimboni. Ungasifaka kalula lesi isikebhe ekhishini lezimboni ngokwakho ngaphandle kosizo lochwepheshe elibizayo. Isikhiphi se-ephuli yokudonsa ekhishini sishiya phansi konke okudingayo ukufaka le isikebhe ekhishini yezimboni, njenge-deck Mount, hoses yamanzi wensimbi, kanye nesiqondisi esicacile sokufaka. Ngisho namagilavu ​​asebenzayo afakiwe ukukunikeza umuzwa wokufakwa okulula nokunethezekile.
Ukufingqa, leli faucet lasekhishini lasentwasahlobo linciphisa i-sprayer likunikeza inani elihle kakhulu lemali, ngenxa yekhwalithi yayo yezimboni futhi nentengo elungile. Kulula ukuyifaka, futhi nakanjani ibe ukwengeza okubalulekile ekwakhiweni kwekhishi lakho lesimanje. Le faucet yasekhishini entwasahlobo idonsa phansi isifutho size newaranti yeminyaka engu-5 kanye nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Njengoba ukwazi ukubona, eWOWOW sinokwethemba isikebhe sethu sokudla ekhishini sidonsa phansi isifutho futhi siyaqiniseka ukuthi uzothokoziswa yinani lemali oyothola. Ake sikujabulise!
Izinzuzo ekhishini isikulufu sokuphephela ekhishini zidonsa phansi isifutho ngokulula:
· Isikhiphi esisebenza kahle ekhishini yezimboni
· Ukufinyelela okubanzi nge-hose amanzi angenakuphikwa
· Ukuqina ngokweqile
· Imininingwane nenhle
· Ingalo edonsa ngamandla ka-Magnetic
SKU: 2312000 Categories: Ikhishi Faucets, Donsela phansi Izicucu Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Ikhishi Sink Faucet, I-single Handle Donsa
30.8 x 12.6 x amasentimitha angu-3